Pep: Waan ku raaxeystay guushii Hull – Gool FM
Pep: Waan ku raaxeystay guushii Hull
Kaafi December 27, 2016
(Manchester) 27 Dis 2016. Tababbaraha ManchesterCity ayaa ka sheegay in ay ahmiyad weyn u lahayd guuhii ay Hull City ka gareen xalay kaddib markii uu arkay in ay wada badiyeen kooxaha ay ku loolamayaan Premier League-ga.
City waxa ay ku qasbanaatay in ay sugto ilaa iyo daqiiqadii 72-aad si ay u jabiso qufilka kulanka waxaana gool ku laad sidaas ku yeelay Yahya Toure.
Hore waxaa u badiyey Asenal, Chelsea iyo ManchesterUnited taas oo keentay in uu guushaas ku faxo Pep.
“Waan ku raaxeystay maxaa yeelay waan badinay laakiin sida caadiga ah waa in aad shaqo adag u qabtid. Qeybtii hore waan ilownay halka goolka jiray, qeybtii dambe weeraryahanadeena wey arkeen goolka, goolkii hore kaddibna wey sahlaneyd,” ayuu ugu warramay BBC Sport.
City waxa ay iminka si KMG ah ugu jirtaa kaalinta labaad waxaase kala bixi karta Liverpool oo caawa Stkoe la dheeleysa hadii ay badiso.
Mou: Pogba waa khadka dhexe ee dunida ugu wanaagsan
Juve oo dar dar galisay xiisaha ay u qabto James